Hongfu AJ-C taxanaha waxay qaadataa mashiinka Cummins. Taxanaha Hongfu AJ-C waa mid leh kalsooni sare, qiimaha isticmaalka waa mid raqiis ah, nolol shaqo dheer, dayactir fudud. Waxaa si ballaaran looga isticmaalaa rugta korantada, dhismayaasha, warshadaha, isbitaalada iyo warshadaha macdanta iwm.
Taxanaha Hongfu AJ-DE wuxuu qaataa mishiinka Deutz. Heerka Emission-EU II, EUIII labadaba taxanaha caadiga ah ee suuqa kala duwan. Range 22KVA-625KVA, waxqabadka ku habboon wax soo saarka joogtada ah, xakamaynta qiiqa, qiimaha isticmaalka shidaalka, gariirka iwm.
Hongfu waxay qaadataa mashiinka Perkins waxayna soosaartaa taxanaha matoorrada taxanaha AJ-PE. Naqshadaynta taxanaha AJ-PE waa in la bixiyo isticmaaleheenna aasaasiga ah. Maalgalin hoose / xallin kharash qaali ah.
Hongfu AJ-Y taxanaha waxay qaadataa matoorka Yanmar oo asal ahaan laga keenay Japan.
Hongfu AJ-KB taxanaha ah waxay taageertaa mashiinka Kubota kaas oo asal ahaan laga keenay Japan.
Taxanaha Hongfu AJ-XC wuxuu qaatay mishiinka FAWDE. Taxanaha Hongfu AJ-XC ayaa leh kalsooni sarre, qiimaha adeegsiga waa mid rakhiis ah, nolosha shaqada oo dheer, dayactirka fudud. Waxaa si ballaaran looga isticmaalaa rugta korantada, dhismayaasha, warshadaha, isbitaalada iyo warshadaha macdanta iwm.
Taxanaha Hongfu AJ-L wuxuu qaadaa mashiinka 'Lovol engine' kaas oo leh astaamaha qaab dhismeedka is haysta, buuqa yar, isticmaalka shidaalka oo yar iyo waxqabadka sareeya. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa aagga isgaarsiinta, tareenka, mashaariicda, warshadaha macdanta iwm.
Hongfu AJ-WP taxane ayaa korsada mashiinka Weichai. Noocyada matoorada ee Weichai waxaa ku jira Weichai iyo Baudouin laba nooc. Heerka mashiinka weichai ee kala duwan wuxuu ka socdaa 23KW illaa 400KW Baudouin oo ah nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee laga helo 406kw ilaa 2450kw.
Taxanaha Hongfu AJ-YC wuxuu qaadaa mashiinka 'YUCHAI' kaas oo leh astaamaha qaab dhismeedka is haysta, buuqa yar, isticmaalka shidaalka oo yar iyo waxqabadka aadka u sarreeya. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa aagga isgaarsiinta, tareenka, mashaariicda, warshadaha macdanta iwm.
Taxanaha Hongfu AJ-YT wuxuu qaadaa mashiinka 'YTO' kaas oo leh astaamaha qaab dhismeedka is haysta, buuqa yar, isticmaalka shidaalka oo yar iyo waxqabadka aadka u sarreeya. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa aagga isgaarsiinta, tareenka, mashaariicda, warshadaha macdanta iwm.
Taxanaha Hongfu AJ-SC wuxuu qaataa mashiinka SDEC kaas oo leh astaamaha qaab dhismeedka is haysta, buuqa hoose, isticmaalka shidaalka oo hooseeya iyo waxqabadka sare. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa aagga isgaarsiinta, tareenka, mashaariicda, warshadaha macdanta iwm.
Matoorka taxanaha ee Hongfu AJ-R wuxuu dejiyaa shirkada 'Y485BD', N4100, N4105, R6105, R6110 iyo 6D10D iwm. Matoorada waxay leeyihiin bandhigyo aad u fiican oo ay ka mid yihiin qiimo macquul ah, isticmaalka saliida oo hooseeya, isku halleyn sare, fududaato in la ilaaliyo iwm
Qiimaha Generaalka, Iibinta Generaalka la Adeegsaday, Generator-ka Naas-nuujiyaha leh Kubota Engine, 240kw Generator, Qiimaha Diesel Generator, Jeneraal yar,